लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका म्यानेजरले मिचे कारागारको जग्गा ! - लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका म्यानेजरले मिचे कारागारको जग्गा !
लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका म्यानेजरले मिचे कारागारको जग्गा !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २३ आश्विन, 11:15:10 PM
चर्चित टिभीका पत्रकारदेखि लामिछानेसम्मको नालीबेली
बीरगंज । बीरगंजको जेलटोल पछाडिका पुराना बासिन्दाले बीरगंज कारागारको जमीन मिचेर घर निर्माण गरिसक्दा पनि जेल प्रशासन कानमा तेल हालेर बसेको आरोप लगाएका छन् ।
कारागार पछाडिको बस्तीमा नयाँ आएका अधिकांश बासिन्दाले कारागारको जमिन मिचेका छन् । यसमा नेपालका प्रख्यात टेलिभिजन पत्रकारको परिवारले पनि जमिन मिचेका छन् तर अरुको बारेमा टिभीमा खेदो खनेर देखाउने ती पत्रकार आफ्नोमा भने मौन छन् ।
बीरगंज कारागारको पछाडि सेन्ट्री भएकै ठाउँमा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका कर्मचारी निशान्त कुमार लामिछानेले आफ्नो आमाको नाममा रहेको साविकको १० धुर जमिनलाई च्याप्दै लगेर २३ धुरको बनाएको आरोप छ । जसमा उनको एकतले शानदार घर ठडिएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय पर्साबाट प्राप्त जानकारी अनुसार निशान्त लामिछाने कि आमा उषा शर्माको नाममा रहेको सो जमिन २०३५ सालमा खरिद गर्दा १० धुर मात्र थियो । त्यसपछि बिस्तारै च्याप्दै लगेर सेन्ट्रीसम्म पुर्याएर ठूलो गेट हालिएको छ । जबकि उषा शर्माको नाममा रहेको सो जमिन पुरानो घरको बाहिरपट्टि बनाइएको चर्पीसम्म मात्रै रहेको दावी नापीका एकजना अमिनको छ । छतमा हरियो रंगको पानीको ट्याङकी र एसी जडान गरिएको सो घर एकवर्ष अघिमात्र निर्माण गरिएको हो । ६ वर्षअघि बीरगंज कारागारका एकजना जेलरले च्यापिएको जमिनको बारेमा चासो लिदैं पत्रकारहरुलाई समाचार लेखिदिन आग्रह गर्दा पनि कसैले वास्ता गरेनन् ।
त्यो बाहेक माथिल्लो स्तरको पढाइको शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि उनको सबै नकली नै रहेको श्रोतले दावी गरेको छ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको बीरगंज शाखाको म्यानेजरको पदमा काम गरिरहेका लामिछानेको बारेमा उनी आफै काम गर्ने इन्स्योरेन्स कम्पनी पनि अञ्जान छ । उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गरेमा सबै थाहा हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
जेलटोलको त्यो लाईनमा बस्ने अरुले पनि जमिन धेरथोर च्यापेको दावी मालपोत र नापीका कर्मचारीहरु बताउँछन । तर लामिछानेले जस्तो डबल्लै च्यापेर घर भने बनाइसकेका छैनन् । लामिछानेकी आमा उषा शर्मा जो उनको १० धुर जमिन किन्ने बेला साक्षी थियो उसैलाई बडो शानका साथ मेरो जमिन २३ धुर हो भन्छिन् । श्रीमानको नामको पेन्सन खाइपाई आएकी शर्माले बिधवा भत्ता समेत लिने गरेकी छिन् । जो आफैंमा गैह्रकानुनी हो । शर्माका श्रीमान् नेपाल टेलिकमका पूर्व कर्मचारी हुन् ।
उनको घरमा बस्ने एकजना बहालवालाले पैसा दिएन भने छोरालाई उकासेर त्यो किरायादारलाई इंगित गर्दै मार मोरा भन्दै मारपिट गर्न पनि उनी पछि नपर्ने गरेको उनकै छिमेकीहरु बताउँछन् । किरायादारसँग मारपिट गरेको आरोपमा निशान्त र उनका भाइ निखिल लामिछानेको बारेमा उक्त किरायादारले प्रहरीमा रिपोर्ट गरेपछि प्रहरीले घरबाटै दुबै दाजुभाइलाई पक्राउ गरेर थानामा थुनेर राखेको थियो । पछि उनीहरु जमानतमा छोडिए तर उनीहरुको गतिविधि भने कम भएन । जेठाजु मरेको १३ दिनको दिन नै उनको घर र जमिन आफ्नो नाममा लेखाउन लोग्नेसँग मिलेर शर्माले आफ्नै बिधवा जेठानीलाई ज्यादै दबाव दिएको किस्सा स्थानीयहरु सुनाउँछन । सोही कारण केही समय अगाडि मात्रै ती बिधवा जेठानीले अर्को विवाह गर्न बाध्य भइन् । कारण आफ्नै नन्दले दिएको दुःख र खेदो खन्नुमा थियो ।
जानकारहरुका अनुसार आधारातमा जेठानीलाई गएर धम्क्याउँदै ‘तँलाई गुण्डा लगाएर पिटाउँछु, बम्बईको कोठीमा लगेर बेश्या बनाएर नचाउँछु’ भन्दै नन्द शर्माले जगल्टयाएकी थिईन् । शर्मा यतिसम्म कि लोभी छिन् कि आफ्नै आमाले राख्न दिएको सबै गहना हड्पेर आमा अचानक मरेपछि दाजुभाइले सो गहनाको बारेमा सोधखोज गर्दा मलाई थाहा छैन भनेर ओठे जवाफ दिएको निकटतम नातेदारहरु बताउँछन् । जसले गर्दा उनको आफ्नै दाजुभाइसँग पनि धेरै वर्ष मनमुटाव रहेको उनको माईतीपट्टिका एक नातेदारले जानकारी दिएका छन् । शर्मा घरमै पनि रक्सौलबाट ल्याएर राखेको सामान (चिनी, दाल आदि) बुहारीलाई बेचेर पैसा लिन्छिन् । जबकि सासु र बुहारी एउटै चूल्होमा खान्छन् । सासुको खटन र कन्जुस स्वभावले गर्दा बुहारी आजित भैसकेको श्रोतले बताएको छ । शर्माले आफ्ना दुबै छोराहरुलाई गलत काम गर्न हौस्याई रहने गरेको दावी समाचार स्रोतको छ ।
म्यानेजर लामिछानेको पृष्ठभूमि
जानकारहरुका अनुसार शर्माका जेठा छोरा निशान्त लामिछाने सानैदेखि टापटिपे स्वभावका थिए । अरुको घरमा केही सामान देख्यो कि उठाएर घर ल्याउने या पैसासम्म चोर्ने काम गर्दथे । त्यही भएर होला उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र सबै नक्कली छ । पढाइमा सार्है कमजोर लामिछानेलाई नेपालबाट एसएलसी पास गराउन नसकेर उनका बुवाले करीब २५ वर्षअघि पाँच हजार रुपैंया खर्च गरेर सीमा पारिबाट नक्कली प्रमाणपत्र किनिदिएका थिए ।
त्यो बाहेक माथिल्लो स्तरको पढाइको शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि उनको सबै नकली नै रहेको श्रोतले दावी गरेको छ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको बीरगंज शाखाको म्यानेजरको पदमा काम गरिरहेका लामिछानेको बारेमा उनी आफै काम गर्ने इन्स्योरेन्स कम्पनी पनि अञ्जान छ । उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गरेमा सबै थाहा हुने जानकारहरु बताउँछन् । उसो त लामिछानेलाई अग्रेंजी बोल्न पनि राम्रोसँग आउ“दैन तर सार्है चतुर र मान्छेसँग डिल गर्न सक्ने खुबी भएकोले उनी बिना योग्यता पनि जागीरमा टिकिरहेका छन् ।
हाल लामिछानेले गरेको सबैभन्दा ठूलो घोटाला भनेको जेलको सार्वजनिक जग्गालाई च्यापेर पर्खाल लगाई आफ्नो घर निर्माण गरेपछि सबै पोल खुलेको हो । उनी कतिसम्म बाठा छन् भने आमाको नाममा रहेको जमिन आफ्नो नाममा सारेर कम्पनीबाट कर्जा लिएर घर बनाएका छन् । त्यस्तै उनले अंशबण्डामा आफ्नै भाइलाई समेत अन्याय गरेको बताइन्छ ।
भाइको भागमा पुरानो घर रहेको ५ धुर जग्गा मात्र परेको छ तर उनको भागमा बा“की सबै जग्गा । बीमा कम्पनीमा जागिर बाहेक रात्रीबस पनि पार्टनरसीप रुपमा चलाएका छन् । उनको बीरगंज स्थित एसक्र्टस मोटर साइकलको शो रुममा पनि लगानी बताइन्छ । साथै सूर्य सहकारीमा पनि उनको शेयर रहेको बताइन्छ । उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु भन्छन् ‘लामिछाने धेरै बाठा छन्, लाटो लड्छ एक बल्ड्याङ, बाठो लड्छ तीन बल्ड्याङ’ ।
२०७५, २३ आश्विन, 11:15:10 PM
स्व. राजा महेन्द्रको श्रद्धाञ्जली सभा बीरगंजमा